'Vonjeo! Nopotehiko ny zava-nisongadinan'ny tranoko fa tsy mety ny manandrana any amin'ny Faucet an-trano, ny fantsom-potsy, ny fandroana fandroana | WOWOW
Home / Interior design / 'Vonjeo! Nopotehiko ny hadisoan'ny DIY ao an-tranoko mba tsy hanandrana mihitsy ao an-trano
2020 / 10 / 01 FisokajianaInterior design 7690 0
'Ampio! Nopotehiko ny hadisoana nataoko tao an-tranoko mba tsy hiezahana mafy hitoerana
Efa mba nanandrana iraka trano DIY ve ianao, ary nanenina mafy? Ao amin'ny vaovao vaovao HGTV “Ampio! Nandrava ny tranoko aho, ” Jasmine Roth manampy ireo tompon-trano izay efa nanandrana, ary tsy nahomby mihitsy, hanamboatra ny fananany.
Roth — izay mety ho azonao amin'ny fisehoany amin'ny “Fanovana miovaova be” sy “Potika miafina” - no nampihena ny asany ho azy. Amin'ity premiere premiere ity mitondra ny lohateny hoe "No Extra Challenge Supervisor," mihaona izy Heather ary Kevin, izay nanomboka tetikady kely maro tao amin'ny tranony Costa Mesa, CA, kanefa tsy nahavita ny iray tamin'izy ireo. Tsy vita ny trano fidiovany, tsy manana backsplash ao an-dakozia izy ireo, ary misy tariby tsy misy sarona koa eo amin'ny bara fisakafoanana maraina.
Leo ny tranony efa tapitra ry zareo, nomen'i Roth vidiny $ 80,000 hanatanterahana ny fanavaozana azy ireo. Na dia toa famatsiam-bola mahasoa aza ity dia misy a betsaka tsy maintsy tanterahina izany. Fantatr'i Roth fa tsy maintsy mamorona izy hamenoana ireo sanganasa rehetra amin'ny lisitry ny zavatra tokony hatao.
Mianara mba hahitanao ny fomba nanamboaran'i Roth ireo singa mbola tsy vita tao an-tranon'i Heather sy i Kevin, ary ampianarina fanampiny momba ny fandraisana andraikitra DIY tokony hataonao — fa tsy tokony — andramo ao an-trano.
Ny backsplash dia tsy natao ho azy fotsiny
Roth dia nikendry voalohany ny tsy fahampian'ny backsplash ao an-dakozia. Nohazavainy tamin'ny mpivady fa toa tsy ho azy fotsiny ilay taila.
"Raha vantany vao ampiasainao ny vilaninao ary ampandehanan'ny rano ny rindrina mankamin'io triatra io," hoy i Roth, nanondro ny trano teo anelanelan'ny kaontera sy ny rindrina, "tsy fantatrao izay mitranga eo indray. Ary tsy tsara izany. Tsy mila rano amin'ny rindrina maina ianao. ”
Ity tile backsplash ity no safidy mety.
Roth dia misafidy taila mosaic fotsy sy fotsy izay manatsara ny cupboard tsirairay sy ny tampon'ny kaontera. Tsy io rindrina io ihany no hitazona ny rindrina tsy ho voan'ny rano, fa azo antoka fa tsara toa izany.
Aza avela ho tokontany fotsiny ny tokotaninao
Ity tokotany ity no toerana mety hihantonana.
Heather sy Kevin dia manana tokontany goavambe, na izany aza tsy ampiasain'izy ireo mihitsy. Nanazava i Heather fa irin'izy ireo ny mamadika ity trano maditra ity amin'ny toerana mampiala voly, toy ny efitrano fandraisam-bahiny faharoa, na izany aza tsy fantany ny fomba hanombohana.
“Tsy fantatray tsotra izao izay hatao,” hoy i Heather. “Tsy fantatray ny fomba ahafahanay manamboatra azy io.”
Ity alàlan'ny bowling ity dia manome mahafinaritra kokoa ny tokotany.
Ka i Roth dia manangana ny toerana farany hangout yard, feno pergola, birao fisakafoanana, lavaka famonoana afo, ary na dia ny lalan'ny bowling aza. Ny tsara indrindra dia tsy manome lanja be loatra ity trano mampiantrano ity. Amin'ny alàlan'ny fametrahana perolaola prefab sy ny fampiasana hazo haverina dia mamaky $ 5,000 amin'ny vidin'ny tokotaniny izy.
Miezaha mamorona mamorona miaraka amin'ny zavatra ilain'ny fianakavian'ireo biby fiompinao
Jasmine Roth dia manaporofo fa tsara kokoa ity varavarana canine ity.
Entam-barotra iray hafa ao amin'ny lisitr'i Heather sy i Kevin maharitra lisitry ny varotra dia varavarana alika. Manana canine kely roa ireo mpivady, ary noho izany dia mila fomba mora azon'izy ireo alefa any ivelany ny zanany.
Na dia tsy mahaliana aza ny vavahadin-kaninina, dia mampiasa hazo haverina i Roth mba hamorona endrika trano kely eo am-baravarana. Miaraka amin'ny famoronana kely fotsiny i Roth dia mamadika ity toetra mampiavaka ity ho toerana malalaky ny efitrano fandraisam-bahiny.
Ny fanavaozana ny trano fidiovana dia tsy natao ho an'ireo vao novambra
Ity farany fanamboarana kabine ity dia tsy nisy nahita teo imasony.
Ity fanavaozana trano ity dia misy fandraisana andraikitra madinidinika, miaraka amin'ny backsplash ao an-dakozia sy ny vavahadin-kaninina, nefa azo antoka fa manana enta-mavesatra lehibe ao amin'ny lisitra tokony hatao: ny trano fidiovana fototra.
I Kevin sy Heather dia nanomboka nanamboatra ny kabine mihitsy, na izany aza nijanona ny tranony rehefa tsapan'izy ireo fa tsy takatry ny sain'izy ireo. Ny trano fidiovana feno dia mipetraka tsy vita, izay raha ny tena izy dia mampidi-doza ho an'ity ankohonana misy telo ity.
"Ny trano fidiovana dia toy ny ampahany lehibe amin'ity trano ity," hoy i Kevin, nanandrana ilay trano mbola tsy vita. “Faly be izahay fa manana trano fidiovana faharoa.”
Ny fandroana fandroana dia mahatonga an'ity trano fidiovana ity halaza kokoa.
Ka fantatr'i Roth fa tokony hasehony amin'ity trano ity ny oasis Kevin ary Heather dia maniry hatrany. Ny fomba iray anaovany izany dia ny famaranana ny kovetabe fandroana amin'ny vato marbra mba hampisehoana azy io ho tsara tarehy, ary ny faran'ny fandroana misy vatasarihana azo ampiasaina amin'ny lafiny savony na lamba famaohana.
Amin'ny farany, ny fandroana fandroana dia manome endrika voadio, ary ny vatasarihana manampy fampisehoana bebe kokoa. Na izany aza angamba ny fanatsarana iray manan-danja dia ny trano fidiovana farany vita!
Ny hazo vita amin'ny hazo dia afaka manampy persona
Toa fotsy sy tsotra loatra ity trano ity.
Roth dia vonona ny hampitsahatra ny iraka tsirairay amin'ny lisitr'i Heather sy Kevin, na izany aza tsy mijanona eo izy. Tiany ny trano hahitana ny tsirairay vita sy mahafinaritra, noho izany dia manome safidy stilika vitsivitsy izy, miaraka amina andry piket iray eo anelanelan'ny lakozia sy ny efitrano fandraisam-bahiny.
Mahafinaritra ny fomba tokana andry iray afaka manova ny endrika efitrano.
Vita avy amin'ny poplar ny hazo, ka maivana sy mora vidy ihany koa. Fanampin'izay, manome maodely marobe izy io.
"Manana an'io sombin-kazo mainty io mankany amin'ny masonao io, dia manome io hafanana io fotsiny," hoy i Roth.
Omeo maodely vitsivitsy ny varavaran'ny tranonao
Ireo vavahady arimoara ireo dia fanatsarana lehibe avy amin'ny varavarana fitaratra mahazatra.
Tao anatin'ny efitrano fandriana, nanaitra an'i Heather i Roth miaraka amina singa iray namboarina ihany: ny vavahady lamba fivoahana.
"Heather dia nieritreritra ny hanome taratra ny varavaran'ny efi-tranony, na izany aza tsy tiako ny manipy fotsiny ny vavahady ety am-baravarankely ary manome anarana azy isan'andro," hoy i Roth. “Te hisandratra aho. Te hitondra ny foto-keviny amin'ny dingana manaraka aho. ”
Ka i Roth dia mandray vavahady takelaka tsotra, avy eo manome fitaratra sy bobongolo mba hampisehoana azy amina endrika vaovao. Fomba tsotra sy mora hanatsarana ny vavahady mankaleo amin'ny tranga hafa izany, ary farany dia toetra mampiavaka ny efitrano fandriana.
Manampy amin'ny fanamboarana ity trano ity ve i Jasmine Roth?
Miaraka amin'ny $ 80,000 fotsiny hanamboarana ireo sanganasa rehetra ao an-dakozia, efitrano fandraisam-bahiny, trano fidiovana, ary tokontany, Roth dia efa mahalala fa ho olana ny mijanona amin'ny vidin'ny vidiny. Ka rehefa tojo fahasahiranana amin'ny fantsom-panafody matanjaka izay mihoatra ny $ 20,000 ny fanamboarana azy dia tsy tapa-kevitra izy hoe ahoana no mety hiverenan'ny fanavaozana.
Na eo aza izany dia vonona ny hampihena ny vidiny amin'ny toerana samihafa i Roth - toy ny fandaniana $ 20,000 25,000 fotsiny eo an-tokotany ho solon'ny vola 83,500 XNUMX $ natokana. Miaraka amin'ireo fanovana ireo, Roth dia niafara tamin'ny fandehanana zara raha tamin'ny vidiny, $ XNUMX. Roth sy ny vondrona misy azy dia afaka mamarana ny fanavaozana ao anatin'ny enina herinandro.
Ary tsara kokoa noho ny rehetra, tian'i Heather sy i Kevin izany.
"Toa trano fonenana nofinofy io," hoy i Heather. “Tena tsapako fa ambony sy mihoatra ny mety ho vitantsika ho an'ny tenantsika izany.”
Ilay nampiana hoe 'Ampio! Nopotehiko ny fanasongadinana ny tranoko fa tsy fahombiazana mihintsy akory izay niseho voalohany tamin'ny fampahalalana momba ny tany sy fiheverana | realtor.com®.
Previous :: Hevitra vitsivitsy hotandremana amin'ny fanaovana fampiroboroboana ny trano Next: Ahoana ny fomba hamahana ny olana amin'ny filentehana anaty rano, ny fantsona ary ny isa momba ny rafitra rano
2020 / 12 / 12 5884
2020 / 12 / 05 6337
2020 / 11 / 29 5974
2020 / 11 / 29 7429
2020 / 11 / 29 6387
2020 / 11 / 29 6592